ရိုက်တာသတင်းထောက် ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ သမ္မတ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်မြောက်လာတဲ့အပေါ် နိုင်ငံတကာ တုံ့ပြန်မှု
ရိုက်တာသတင်းထောက် ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ သ...
7 พ.ค. 2562 - 20:24 น.
ရိုက်တာသတင်းဌာနဲ့ သတင်းသမားနှစ်ယောက်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရလို့ ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ ရှေ့နေ အမားလ် ကလူနီက ပြောပါတယ်။
သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ရိုက်တာ သတင်းထောက် ကိုကျော်စိုးဦးနဲ့ ကိုဝလုံးတို့ လွတ်မြောက်မှုကို နိုင်ငံတကာက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အပေါ်တော့ စိုးရိမ်စရာတွေရှိနေသေးတဲ့အကြောင်း ပြောကြပါတယ်။
အကျဉ်းသား ၆ ထောင်ကျော် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အထဲ ရိုက်တာသတင်းထောက် ၂ ဦးပါ
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတားရက်စ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ရိုက်တာ သတင်းထောက်တွေ လွတ်လာတဲ့ သတင်းကြားရလို့ စိတ်သက်သာရာ ရမိကြောင်း သူ့ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ စတက်ဖန် ဂျူဂျရစ်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့
ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ လွတ်မြောက်လာတာကို ကုလသမဂ္ဂ(မြန်မာ)က ကြိုဆိုပါတယ်။ အခုလွတ်မြောက်လာတာက သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အတွက် ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးလာတာနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်းအတွက် အစိုးရရဲ့ အားထုတ်မှုတို့ကို ဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ကုလသမဂ္ဂက ဆက်ပြီး အထောက်အပံ့ ပေးဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်။
ရိုက်တာ အယ်ဒီတာချုပ် စတိဗ် အဒ်လာ
"မြန်မာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ သတင်းထောက်နှစ်ယောက်ကို လွှတ်လိုက်လို့ အများကြီး ကျေနပ်ဝမ်းသာပါတယ်။ သူတို့ အဖမ်းခံရတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅၁၁ ရက်ကစပြီး သူတို့ဟာ ကမ္ဘာမှာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာရဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့ ပြန်လာတာကို ကျွန်တော်တို့ ကြိုဆိုပါတယ်။"
နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့က ဒန်နီရယ် ဘာ့စတဒ်
"အခုလို လွတ်မြောက်လာတာဟာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှု သတင်းစာပညာအတွက် တကယ့်ကို အောင်မြင်မှုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဝလုံးနဲ့ ကျော်စိုးဦးတို့ သတင်းသမားနှစ်ယောက်စလုံး အစကတည်းက အကျဉ်းထောင်ထဲကို မရောက်သင့်တာပါ။ သူတို့ဟာ တပ်က သူတို့ကို မလုပ်စေချင်တဲ့ သတင်းကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးသားတာပါ။ သူတို့အလုပ် သူတို့လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို သူတို့လွတ်လာတာတောင်မှ အာဏာပိုင်တွေဘက်ကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးက သတင်းသမားတွေကို ပြောချင်တဲ့ သတင်းစကားက အင်မတန် ကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ရက်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် ထောင်ထဲသွားနေရမယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါက သူတို့မလုပ်စေချင်တဲ့ သတင်းကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီး ရေးရင် ပြန်ပေးဆပ်ရမယ့် တန်ဖိုးပဲ။"
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့ ခရီးက ရှည်နေသေးတယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်"- ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျယ်ရမီ ဟန့်
ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျယ်ရမီ ဟန့်
"အခုကိစ္စမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အသိအမှတ်ပြုရမယ်။ တရားစီရင်ရေးမှာ မျှမျှတတ လုပ်မထားတဲ့ ကိစ္စတွေကို သူက ပြန်စိစစ်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီး သူတကယ် လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ အခုလို သမ္မတ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါက မြန်မာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အကြား ဆက်ဆံရေး စာမျက်နှာသစ် ဖြစ်လာမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ရခိုင်က ရိုဟင်ဂျာတွေ အရေးကိစ္စမှာလည်း အဲလို သဘောထားကြီးမှုမျိုးရှိလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရိုက်တာ သတင်းသမားနှစ်ယောက် အခုလို ထောင်ဒဏ်ကျခံရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက သူတို့က အာဏာပိုင်တချို့ သဘောမကျတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်း ရေးတာ ဖြစ်လို့ပါ။"
နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့မှ နီကိုးလပ်စ် ဘက်ဝဲလင်း
"ဝလုံးနဲ့ ကျော်စိုးဦးတို့ အမှု အစအဆုံးက တရားရေးကဏ္ဍရဲ့ မှားယွင်းမှုပါ။ သူတို့က ထောင်ထဲမှာ တစ်ရက်တောင် မနေသင့်ပါဘူး။…
သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့ လှုပ်ရှားခဲ့သူတွေအားလုံးက အစိုးရရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုဆိုပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းသမားတွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေကို ဝေဖန်တဲ့သူတွေကို ဖမ်းဖို့ ဖိနှိပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိနေပါတယ်။…
အဲဒီ ဥပဒေတွေ မပယ်ဖျက်သေးသရွေ့ သတင်းသမားတွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရနိုင်တယ်ဆိုတာက အမြဲတမ်းခြောက်လှန့်နေမှာပါ။"
မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ အသင်း ယူကေ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းခင်
" ရိုဟင်ဂျာတွေ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုအတွက် ထောင်ချသင့်တာက အဲဒါကို ကျူးလွန်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ သူတွေ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။"
သတင်းသမားတွေ သူတို့ အလုပ် သူတို့လုပ်ဖို့ ကြောက်လန့်နေရတဲ့ဘဝကနေ အခု သူတို့လွတ်မြောက်လာတာက မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ခေတ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။
ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ယောက်အတွက် ဥပဒေ အကြံပေး အမားလ် ကလူနီ
"လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော် ဒီအမှုကို စကိုင်တွယ်ကတည်းက သူတို့သတင်းထောက်တွေ တရားမျှတမှုရရှိဖို့ ရိုက်တာသတင်းဌာန အထူးသဖြင့် အယ်ဒီတာချုပ်နဲ့ ဥပဒေ အကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အပြစ်မရှိသူတွေနဲ့ တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သတင်းစာပညာကို သတင်းဌာန တစ်ခုက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို မြင်ရတာ လေးစားအားကျစရာပါပဲ။
ရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့ သတင်းထောက်နှစ်ယောက်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရတာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အခုသူတို့ လွတ်မြောက်လာတာက မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှု လက္ခဏာပဲလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။"
อัลบั้มภาพ ရိုက်တာသတင်းထောက် ကိုဝလုံးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ သမ္မတ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်မြောက်လာတဲ့အပေါ် နိုင်ငံတကာ တုံ့ပြန်မှု